Union Minister U Kyaw Tin receives Deputy Secretary of Asia and Americas Group of the Ministry of Foreign Affairs and Trade of New Zealand – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Union Minister U Kyaw Tin receives Deputy Secretary of Asia and Americas Group of the Ministry of Foreign Affairs and Trade of New Zealand
U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation received Mr. Ben King, Deputy Secretary of Asia and Americas Group of the Ministry of Foreign Affairs and Trade of New Zealand on7February 2019 at 3:30 pm at the Ministry of International Cooperation, Nay Pyi Taw.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှနှင့် အမေရိကဒေသဆိုင်ရာ လက်ထောက်ဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှနှင့် အမေရိကဒေသဆိုင်ရာ လက်ထောက်ဝန်ကြီး H.E. Mr. Ben King အား ၇-၂-၂၀၁၉ ရက်၊ ၁၅၃၀ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကဏ္ဍ၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္ဍ၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍနှင့် ဒေသတွင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် နှစ်ဖက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်သွားရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စတွင် အပြုသဘောဆောင်သော အထောက်အပံ့များ ဆက်လက်ပေးအပ်သွားရေးတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။